Softwares တွေ Download လုပ်ရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Softwares တွေ Download လုပ်ရအောင်
ဒီ Ftp Site မှာ Software ပေါင်းများစွာ ရှိနေပါတယ်။ အမျိုးအစားတွေလည်း ခွဲပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ - windows\_browser folder အောက်မှာပဲ ဆော့ဝဲလ်ပေါင်း (၃၀)ကျော်လောက် ရှိပါတယ်။ Update သိပ်မဖြစ်ပေမယ့် Vista ကလွဲလို့ OS တော်တော်များများအတွက် ဆော့ဝဲလ်တွေ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှိနေတာ အံ့သြစရာပါ။ Firefox နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ FTP ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ :)
ကိုသဝေထိုး, ဆန်းမောင်, နိုင်လင်းစိုး, သန်းဇော်လင်း, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, နိုးတူး, linthuraaung, maJunior, Thein Than, yelinoo
ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်နက်ရှင် အခြေအနေကြောင့် ၀င်မကူနိုင်ဘူးဗျာ တစ်ခုပဲသိတယ် အဆင်ပြေရင်တော့ သုံးကြည့်ကြပေါ့ဗျာ ဒီဆိုဒ်လေးက လိုချင်သမျှအကုန်ရနိုင်တယ်ဗျ သွားကြည့် ကြပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ချစ်လား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ဆန်းမောင်, ဖိုးပြည့်, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်သံသရာ, အောင်ကျော်ဆန်း, နိုးတူး, linthuraaung, phoetharlay, Starfire, Thein Than, yelinoo
ကျွန်တော်ဒီနေ့ ဟိုဝင်ကြည့်ဒီဝင်ကြည့်နဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တော်တော်များများကို အလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရသော နေရာလေးတစ်ခု တွေ့မိလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... အဆင်ပြေပါစေ..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ leostar81 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, KZaw, linthuraaung
ပြန်စာ - အသုံးများသော application softwares များရှာဖွေရန်
ရှာတာတော်တယ်နော် အများကြီးရှိတာဘဲ သုံးတတ်တဲ့သူအတွက်ကတော့ တကယ်အခွင့်အရေး တရပ်ပါပဲ
မောင်သံသရာ, linthuraaung, p8yohtet
အခုလိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ကြားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ..နောက်ထပ်လဲ ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ရှာဖွေမျှဝေသွားပါ့မယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ leostar81 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ်7ခုအတွက် 42 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Softwares တွေ Download လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီ Site လေး ကို သတိရကြပါ.....
Softwares တွေကို Crack ပါ ပါပြီးသားပါ.... မသိသေးသူများကို အသိပေး ကြောင်းကြား ပါတယ်.... Up To Date Softwares and other တွေကို တော်တော်များများ Free ရနိုင်ပါတယ်..... အဲဒီ Site ကတော့ http://www.phazeddl.com ဖြစ်ပါတယ်....
ကဲရှာကြည့်လိုက်ရအောင် ---> http://www.phazeddl.com
Nothing can be really great which is not right !!!
မမှန်ကန်သော ဘယ်အရာမှ ကြီးမြတ်သော အရာဖြစ်မလာနိုင် !!!
Last edited by kogyiphothu; 04-02-2008 at 10:42 PM.. Reason: စာလုးံပေါင်းမှား
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ kogyiphothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ကိုသဝေထိုး, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်သံသရာ, kay kyawt zin, linthuraaung, tu tu, yelinoo
Visit kogyiphothu's homepage!
Find More Posts by kogyiphothu
ပြန်စာ - Softwares တွေ Download လုပ်ရအောင်
Originally Posted by kogyiphothu
ကျွန်တော်လဲ ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ သိရင်လဲသိမှာပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ phoelapyaee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, KZaw, linthuraaung, yelinoo
Thank you.... အဲဒီ Links တွေမသိသေးဘူး..... http://www.phazeddl.com နဲ့ပဲ ကျေနပ်နေတာ ကျေးဇူးပါ.....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ kogyiphothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, kyawlay, yelinoo
ကျွန်တော်လဲ ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ သိရင်လဲသိမှာပါ။ Cracked Software တွေ ပါ ။
မသိသေးသူများကို အသိပေး ကြောင်းကြား ပါတယ်.... Up To Date ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စား ရင် ကြည့်လိုက်ပါဗျာ ။
Register လုပ်ပြီးရင် ကြိုက်သလောက် Download လုပ်နိုင် ပါပြီ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Min Maung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သုည, မောင်သံသရာ, အောင်ကျော်ဆန်း, linthuraaung, yelinoo, yownlay
ံHere is the huge collection of All Softwares including engineering softwares..http://www.verycd.com/
Unfortunately, This is in Chinese Website..
But, you can translate into English by means of http://babelfish.altavista.com/....
Unfortunately, It can not directly download...
But, you can use emule software to download (www.emule-project.net/ ) ..
Unfortunately, this software is P2P software and takealong time to complete download..
But, It can download parallely many softwares at the same time..
Unfortunately, Some countries banned this website..
But you can bypass with http://youhide.com/
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ myanmar0001 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, linthuraaung, yelinoo
Find More Posts by myanmar0001
တည်နေရာ: London, United Kingdom
ပို့စ် 42 ခုအတွက် 126 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ aung.24 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, မျိုးဇော်00001, မောင်သံသရာ, linthuraaung, yelinoo
Visit aung.24's homepage!
Find More Posts by aung.24
14-03-2008, 06:04 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ .. နောက်ရှိရင်လည်း ပေးဦးနော်..
ကျေးဇူးတင်စကားပြောရုံဘဲ ဆိုရင် thanks ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ။ ပို့စ်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ မတင်ပါနဲ့ ။ ပထမဆုံးပို့စ်ကို ကြည့်လိုက်ပါ ။ thanks ခလုပ်နှိပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြထားတာ ၁၀ ယောက်မကပါဘူး ။ အကယ်၍သာ အစ်ကိုတို့လို ကျေးဇူးတင်တိုင်း ပို့စ်အသစ်တစ်ခုရေးရမယ်ဆိုရင် ဒီတော့ပစ်တစ်ခုလုံး ဆိုဒ်လင့်တွေထက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောတဲ့ပို့စ်တွေနဲ့ ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ် ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, bodavid20, foothet, linthuraaung, minkokoster, yamcboy, yethway
website link to download game and apllication
ပထမlinkက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယlinkမှာ accountဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတာ မရဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ကြိုးစားကြည့်ကြတော့၊
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ wudemonhunter အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by wudemonhunter
ပြန်စာ - website link to download game and apllication
အဲဒီ website တွေက Rapidshare နဲ့ပေးထားတာတွေပါ။ ဒီမှာဝင်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဆင်ပြေပမလဲ။ အဲဒီတော့ wudemonhunter အနေနဲ့ အဲဒီ site တွေကနေ Download ချ၊ ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့လိုပဲ မိသားစုဝင်တွေ Download ချလို့အဆင်ပြေမယ့် Site တွေကနေပြန်တင်ပေးပါလား။ အဲဒါဆို မိသားစုဝင်တွေအတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။
နောက်ပြီး အခုတင်လိုက်တဲ့ Post ကလည်းနေရာမှားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖိုရမ်လေးမှာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ PyaitSone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, linthuraaung, yelinoo
ိdownload အများကြီးချ ပြီး forum အတွက် အကျိုးပြုနေတဲ့ အကို အမတွေ နဲ့ forum မှာရှိတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ် ....
hacker site တစ်ခုကရတာ .....premium accountတွေပါ...
ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ သုံးတာနဲ့ အားလုံးသုံးရင် ပိုကောင်းမှာပါ..
( www.warezquality.com )
( www.warezreleases.com/members/login )
( www.unlimitedgamedownloads.com )
( www.fulldownloads.us )
Last edited by ဇွဲသူရိန်; 22-06-2008 at 06:00 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ဇွဲသူရိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သုည, မောင်သံသရာ, အောင်ကျော်ဆန်း, Kyaw Hpone Myint, kyawmin, linthuraaung, yelinoo
သူငယ်ချင်းတို့၏ Computer များအဆင့်မြင့်စေရန်
ဒီ web ကတာဝန်ယူတယ် download များကိုလွတ်လပ်စွာ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ phonethadoelin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by phonethadoelin
ဒါလေးရော တင်ပြီးပြီလားမသိ ..
Last edited by maJunior; 26-08-2008 at 11:41 AM..
softwares & crack links
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်မယ် လို့ထင်ပါတယ်
ကိုသဝေထိုး, မောင်သံသရာ, အောင်ကျော်ဆန်း, အေးချမ်းမောင်မောင်, foothet, linthuraaung, nightman, rfanquee, saiaikbee, yelinoo
ှSerialls, Keys, Keygen, Cracks
ှSerialls, Keys, Keygen, Cracks တွေကို ဗုံးပေါလအော အသုံးချခြင်သူများ။ ဆော့ဖ်ဝဲလ် မျိုးစုံတောင်လိုပုံနေတဲ့အထဲမှ မိမိစိတ်ကြိုက် ရွှေချယ်အသုံးပြုလိုသည့်
ဆော့ဖ်ဝဲလ် Crazy များအတွက် ရတနာသိုက်ကြီးတစ်ခု လမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သိပါသားဆိုလဲပီရော အဲ ဟုတ်ပေါင် သိပါသားဆိုလဲ ဆောရီးနော် နှစ်ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိတာပေါ့ လို့............. ဟင်း ဘာမှန်းလဲ သိဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဖိုးသေးသေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဖိုးသေးသေး
ဒီမှာလဲ လိုအပ်တဲ့ ကီးလေးတွေ ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဖိုးသေးသေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သာယာ, မောင်သံသရာ, linthuraaung, yelinoo
Originally Posted by ဖိုးသေးသေး
software တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီး ..စမ်းကြည့်တော့ ..
တက်လာတာက Closed side တဲ့...
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, linthuraaung
ကျွန်တော်တော့ Babylon ကီးကို ဒီအထဲကပဲ ရတာခင်ဗျ။ အဲဒါကြောင့်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီလောက် အများကြီးထဲမှာ မရတော့တာ တွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မရိုးသားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော် အခု အဲဒီကဲ ရတဲ့ကီးနဲ့ပဲ Babylon ကို အသုံးပြုနေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
မှာသွားတယ် ဆိုရင်တော့ စေတနာ အမှားပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဖိုးသေးသေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, မောင်သံသရာ, linthuraaung
site Closed ဆိုတာက kaspersky ကို ဖွင့်ကြည့်မိတာပါ..
ကိုသဝေထိုး, မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်
ကျွန်တော်လဲ တစ်ခုပြောလိုက်အုန်းမယ် သိတဲ့ သူတွေလဲ ရှိမှာပေါ..နော်..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Toekalay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, မောင်သံသရာ, linthuraaung, yelinoo
ကျွန်တော်သိတာလေးကိုလည်းထပ် ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်......။New Software များကို Download လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးပါ။ Crack file နဲ့ Keygen လဲပါပါတယ်။ http://www.fixdown.com/english/
သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ Sjftware တွေကို အဲဒီမှာပဲယူပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ http://fileshunt.com/ ပါ။ Software တွေကို crack ပါပြီးသားပါ။ up to date software အခြားလိုအပ်တာများကိုလဲရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။လိုချင်တာလေးကို Search box လေးထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ ရှာလိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျ။
ကျွန်တော်ကတော့ဒီ wedite လေးနှစ်ခုနဲပဲအဆင်ပြေနေပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ tar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 19 ခုအတွက် 29 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
့http://www.portableturk.com/ မှာ portable တွေရှိတယ်နော်အသုံးလိုရင်ပေါ့ 
ကျွန်တော်မှားနေရင် အမှန်နေရာကိုရွေ့ ပေးကျပါနော်
ရှိပြီးသားဆိုရင် sorry နော် ..........မသိလို
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ aunggyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by aunggyi
tar ဒီ site မှာ shareware တွေဆိုရင် crack file နဲ့ Keygen ပါလို့လား??
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Mr.MK အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, bothu, linthuraaung
ပြန်စာ -ှSerialls, Keys, Keygen, Cracks
ဖိုးသေးသေးကိုတော့ အားနာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီရတနာသိုက်ကြီးကိုတော့ မသုံးကြပါနဲ့ဗျာ။ ရတနာ Virus လေးတွေစုနေလို့ပါ။ ကျွန်တော် စမ်းပြီးလို့ပါ။ Kaspersky တင်ထားရင်သိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်စက်မှာ Kaspersky တင်ထားလို့ အဲ့ဒီက down လိုက်တိုင်း trogen ဆိုပြီးထ, ထအော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ crack/ keygen/ patch ဆိုတိုင်းမက်ပြီး မ down လိုက်ပါနဲ့။ ကျွန်တော် အသိပေးတာပါ။
Last edited by အကြော်ဆရာ; 13-10-2008 at 12:00 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ အကြော်ဆရာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
www.passwordtools.com မှာ password recovery software တွေအများကြီးပဲသွားယူပြီးစမ်းကြည့်ကြသိလား
မောင်သံသရာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, thighwanna, yelinoo
YouTube က video တွေ download လုပ်ကြမယ် jit too Applications 26 12-04-2013 12:15 AM